Ka hor inta hadlayaan dhibcood oo ku saabsan qalab maamulka mashruuca Android, waa inaad marka hore la fahmo waxa ay mashruuc ka yahay. Sida laga soo xigtay maamulka mashruuca Body ee wax og (PMBOK), mashruuca waxaa lagu qeexaa sida dadaali ku meel gaadh ah si ay u abuuraan gaar ah wax soo saarka, adeeg ama natiijada. Mashruuc kasta waxa uu ku bilowday la hubo, iyo dhammaadka. Ugu dambeyn ayaa waxaa la soo gaadhay markii ujeeddooyinka mashruuca la gaadhay, markii mashruuca la joojiyo, waayo, ujeeddooyinka ay yihiin buriyay haleeli ama mar dambe marka loo baahan yahay wax soo saarka dhamaadka ama natiijada mashruuca. Qalabka ay yihiin kuwo aad muhiim u ah raad maadaama ay mashaariic ay ka qeyb dhexe ee habka raadraaca u sameeyaan. Waxay ula socdaan waxa dhab ahaan dhacaya mashruuca si natiijada dhabta ah la barbar dhigi karaa natiijada qorsheysan iyo tallaabooyinka sixitaanka sameeyo si loo saxo wixii khaldama ah. Telefoonada Android soo maamulka mashruuca software labada bixisay iyo free la qalafsan balaadhinta set feature wax soo saarka ah.
Qeybta 1: Android loo qabto liiska Manager App VS Android Project Management App Qeybta 2: Top 5 Android Project Management Apps Qeybta 3: Poll: Waa kuwee Android Project Management Apps Ma jeceshahay Qeybta 4: Sida loo Download / rakib / uninstall / Share Project Management for Android in hal meel ah
Qeybta 1: Android Manager loo qabto liiska App VS Android Project Management App
Ugu qalbiga mashruuc kasta oo guul waa qorshe si fiican u maleeyeen-ka iyo dil. Wixii iskaashi muddo dheer nidaamka maamulka mashruuca ayaa kobciya u dhexeeya kooxo aqoonyahano laakiin adduunka technology maanta ayaa jidka maamulka mashruuca bedelay.
Chine maamulka mashruuca Android xal loogu heli lahaa, waayo, waxaad si ay ula socdaan horumarka mashruuca xataa marka aad ka shaqeeya dibadda xafiiska. Waxay leedahay badan oo kala duwan marka laga eego sifooyinka iyo awoodaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad la yaabanahay haddii aad u isticmaali kartaa si Android-liiska yeela maamulayaasha in ay qaataan meeshii barnaamijyadooda maamulka mashruuca. Bal aan iyaga u sharax in faahfaahinta:
Android loo qabto liiska tababaraha
App maamulka mashruuca Android
1. Isticmaalka Personal Professional iyo shaqada isticmaalka
2. Simple nidaamka CRM lahayn Iyada oo nidaamka CRM
3. Network looma baahna Network loo baahan yahay
4. Deegaanka oo dhan Deegaanka waxbarashada
5. Focus on natiijada Fiiro gaar ah oo ku saabsan horumarka la
1. Tababaraha Si aad u-liiska sameeya waxay bixisaa liiska buuxa waxa loo qabto habboon u maareynta hawsha shakhsiga ah. Waa wanaagsan tahay in ay ka shaqeeyaan sidii waanada idiin, halka codsiyada hoggaamiyaha mashruuca Android waxaa loo isticmaalaa shaqada iyo shaqaalaha xirfadda leh.
2. maamulayaasha Si-liiska sameeya inta badan waa sahlan in ay isticmaalaan. Waqti marka aad wici doonaa hooyadaa oo idin xusuusin doonaa ringtones. Chine maamulka Mashruuca waxaa loo isticmaalaa shaqada si dad badan oo ka qaybqaadan doona mashruuca. Noocan ah qalab maamulka mashruuca waxaa mararka qaarkood loo bixiyo oo loogu talogalay shirkadaha oo dhan ka tirsan shirkad ama dad shirkadaha kale. Nidaamka CRM waa waajib, waana taas daraaddeed.
3. Tan iyo markii dadku ka shirkado kale oo ay sidoo kale ka qayb geli kara mashruuca, qalab maamulka mashruuca u baahan tahay shabakad loogu talagalay dadka si aad u cusboonaysiiso horumarka. Network No sidoo kale ka shaqeyn karaa iyada oo in-liiska tababarayaasha yeela.
4. maamulayaasha Si-liiska sameeya waxaa laga yaabaa in qaybaha shaqada, shopping, qoyska loogu talagalay in aad muddo app maamulka mashruuca waxaa kaliya loogu talagalay shaqada.
5. Marka ay dadku ka sameeyaan a-liiska loo qabto, ujeedada ugu weyn waa in hawsha ay u dhammaystiraan. Waa hagaag, marka dadka la abuuro mashruuc, dadka la qorsheeyo si loo casriyeeyo horumarka iyo madaxa doonayo si loo hubiyo in.
Qeybta 2: Top 5 Android Project Management Apps
Hoos waxaa ku kiniin ah oo ku saabsan barnaamijyadooda ugu sareysa maamulka 5 mashruuc loogu Android. Waxaad heli kartaa eegno waxa ka dooro app aad doonay inay la socdaan wanaagsan ee aad mashruuca.
1. Basecamp - rasmiga App Free 4.7 / 5
Tababare 4. MPM Mobile Project Lacag 4.1 / 5
1. Basecamp - rasmiga App
Tani waa mid ka mid ah Apps ugu isticmaalay in maamulka mashruuca la qaababka hoos ku qoran:
Waxaa hubinayaa horumarka mashruuca.
Waxa ay ku siinaysaa qolka si looga doodo iyo falanqayn mashruuca.
Waxay bixisaa madal xubnaha kooxda mashruuca ay ku wadaagaan fikrado iyo qolka tashiga.
Codsiga waxaa u ogolaanaya hoggaamiyaha mashruuca si fudud oo ku habboon aad ula xiriirto xubnaha kooxda mashruuca.
Waxay siisaa fursad ay xubnaha kooxda mashruuca ay ka wada hadlaan siin fikirradooda iyo wax ku saabsan mashruuca opinion.
Xubnaha kooxda buuxiyo iyo geliyaan si ay u sameeyaan files si ay dhammaan xubnaha kooxda ka eegi kartaa horumarka mashruuca.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u helaan iyo mashruuca aragtida horumar meel kasta oo aad.
Codsiga ayaa Basecamp classic aan la taageeray.
Download Basecamp - rasmiga App ka Google Play Store >>
Smartsheet waa codsi ah in siiyaa fursad u shaqo fog. The qaababka ugu muhiimsan ee codsigan waa:
Waxay leedahay isbiriidhshiit fudud.
Waxay bixisaa interface wadaaga files.
Waxaa abuuraa workflows si toos ah la wadaagi karto xubnaha kooxda mashruuca.
Waxa ay u ogolaataa Tababaraha mashruuca si ay u horumariyaan gooldhalinta Gantt.
Codsiga waa fududahay in la isticmaalo.
Waa arrin aad u dabacsan la nooc kasta oo mashruuca ka hawlaha fudud in hawlaha adag inta lagu guda jiro oo dhan fulinta mashruuca.
Codsiga waxaa u qaaddey si dhakhso ah oo bixiya ammaanka ugu badan, integrations oo gacanta ku in ka badan shuruudaha shirkadaha.
Waxa ay u ogolaataa xubnaha kooxda mashruuca ay ku wadaagaan fikrado iyo warbixin ku saabsan horumarka mashruuca.
Waxay u baahan tahay in aad si joogto ah dhoofsadaan faylasha jira barnaamijyada kale sida Excel, ama qalabka download taas oo ay qaataan waqti iyo mararka qaarkood ay ku jiri kara barnaamijyada laga shakiyo ama virus.
Download Smartsheet: Project Management ka Google Play Store >>
App Tani waxay u ogolaaneysaa labada ganacsiga yar yar iyo weyn si loo dardar hawlaha ay maamulka mashruuca.
Waxaa diyaariya madallo in lagu daro ama la abuuro mashruuc cusub.
Waxay leedahay boosteejo ah oo ka mid ah shakhsiyaadka ee kooxda mashruuca u qaybi hawlaha.
Waxay leedahay goobidda iyo hawlaha share fursadaha.
Waxay bixisaa dhufto si ay u dejiyaan xusuusinta xirmin.
Codsigan waa dabacsan oo aad ula socdaan horumarka mashruuca si fudud.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loo xakameeyo markii mashruuca ay ku daray bilowga iyo dhamaadka taariikhaha mashruuca si ay ula socdaan horumarka shaqada.
Waxaa laga yaabaa in mashaariicda fudud adag.
Waxaa ma ogola in aad si ay u quudiyaan waxyaabaha qaar ee mashruuca.
Download Management System Project ka Google Play Store >>
4. MPM hoggaamiyaha mashruuca mobile
Waxay bixiyaan xal loogu abuuro mashaariic cusub oo aad u dajiyaan karaa ka hadalka MS, luuqeeyo iwm
• Waxay leedahay horreeyay badan.
• Waxay bixisaa biilasha HTNL / Excel loo isticmaalo Gantt diyaarinta shaxda iyo warbixinta.
• Waxay bixisaa links for files, xiriirada, iyo qoraalada.
• Waxay bixisaa utility loo isticmaalo baadi hawlaha gudahood mashruuca.
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u maareeyaan khayraadka inta lagu guda jiro fulinta mashruuca.
• Waxay bixisaa liiska hawsha ku tiirsan si ay tababarayaasha mashruuca yeelan doonaan fiiro dhow iyo kormeerka in shaqooyinka qaarkood.
• Waxaa abuuraa wararka iyo xiriirada ee dhammaan howlaha iyo xubnaha kooxda mashruuca.
• Waxay kuu ogolaanaysaa inaad qabto kooban ee xaaladda mashruuca.
• Waxay bixisaa isgaarsiinta fudud iyadoo la adeegsanayo MPM in xubnaha kooxda mashruuca fariin.
Codsiga waa mid u nugul hartay mar kasta oo aad isku daydo in la furo mashruuc cusub ee la abuuray.
Download hoggaamiyaha mashruuca mobile MPM ka Google Play Store >>
Tani app maamulka android waa shabakad bulsho gudaha ah oo aad - isticmaala shirkada. Waxaa kor u macluumaadka sarrifka gudaha iyo isgaarsiinta oo go'an dhamaystiran oo qalab ganacsi galay interface hal dareen meelaha.
Iyadoo app this, aad la wadaagi karto hawlaha, ka hadlo dadka kale posts, sida posts, iyo diri fariimaha deg dega ah iyo farriimaha. Intaa waxaa dheer ay taageerto kooxaha buugga shirkadda iyo shaqada.
Waxaa ay maamulaan mashaariicda iyo hawlaha labada.
Waxaa aad u saamaxaaya in ay wada hadlaan fikrado istaraatijiyad iyo dhacdooyinka ka socda qaab network bulshada.
Waxaa aad u saamaxaaya in ay qorsheeyaan kulan la jadwalka taariikhda la wadaago.
Waxay bixisaa la aamin ah oo fudud oo war isdhaafsi.
Waxaa kordhiyaa hufnaanta shaqaale kasta oo shirkadda oo dhan.
BBitrix24 ma IT waa ka buuxay.
Warqadaha ma aha mid dhammaystiran sida codsiyada kale.
Download BBitrix24 ka Google Play Store >>
Qeybta 3: Poll: Waa kuwee Android Project Management Apps Ma jeceshahay
Qeybta 4: Sida loo Download / rakib / uninstall / Share Project Management for Android in hal meel ah
In labada qaybood oo ugu horreeya, waan idin tusay waxa faraqa u dhaxeeya Android app mashruuca iyo Android Tababaraha app to-liiska sameeya iyo liiska ugu sareeya 5 tababarayaasha mashruuca Android. Qaybtan, waxaan go'aan si uu idiin tuso xal fiican si ay uga caawiyaan waxaad kala soo bixi, rakibi, uninstall, raad raac iyo wadaagaan barnaamijyadooda hoggaamiyaha mashruuca Android hal meel.
Si aad u isticmaasho taasi xal, ugu horreeya oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo gashato - Wondershare MobileGo for Android (Win) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) on your computer. Markaas, raac tallaabooyinka fudud u maamulaan barnaamijyadooda hoggaamiyaha mashruuca loogu Android.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma aad bixin xarunta download ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda mashruuca Android, guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD ama share barnaamijyadooda saaxiibadaa.
Tallaabada 1. Download version saxda ah ee software-ka kombiyuutarka. Ku rakib iyo waxa maamula.
Tallaabada 2. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay kombiyuutarka. Haddii aad tahay qof user Windows ah, waxa kale oo aad isticmaali kartaa isku xiraan via WiFi.
Tallaabada 3. geeska bidixda ah ee kore, guji Google Play Apps in ay soo baxdo iyo rakibi Tababaraha mashruuca barnaamijyadooda Android kor ku xusan. (Oo keliya ayaa diyaar u ah version Windows)
Tallaabada 4. Riix Apps on column ka tagay inay soo qaadaan suuqa kala maamulka app. Markaas, waxa kale oo aad dajiyaan karaa iyo barnaamijyadooda maamulka mashruuca rakibi ka computer, dhoofin barnaamijyadooda si ay u computer, guuraan Dalka Chine in ay kaarka SD, u arkaan info ka faahfaahsan oo ku saabsan app kuwan, oo iyaga waxaa la Facebook, Twitter ama SMS saaxiibo aad la wadaagto.
Fiiro gaar ah: Guuritaanka hoggaamiyaha mashruuca loogu barnaamijyadooda Android inay card SD iyo barnaamijyadooda la wadaago keliya baa la samayn karaa version Windows ee wakhtigan la joogo.
3 Siyaabaha Photos kaabta on Android Phone
3 Siyaabaha Xiriirada kaabta on Android Phone
3 Tools in SMS Android kaabta in, PC SD Card & Cloud
Faylal ay u guuraan / ka Device Android via WiFi
A Guide Full in kaabta Android SD Card
Nuqul Data ka iPhone in Android
Waa maxay Rom / firmware iyo Sida loo kaabta Android Rom / firmware
> Resource > Android > Tools Top 5 Android Project Management Si aad ula socoto Good ah mashaariicda